Bengali Rohingya Terrorist Attack in Arakan, June 2012: ဇွန် (၁၉) နေ့တွင် မိမိ၏ ရပ်ရွာနှင့် လူမျိုး ကို၊ ဘင်္ဂါလီကုလားများရန်မှ အသက်ပေးကာကွယ် ရင်း အသက်စွန့် သွားရရှာသော ရသေ့တောင်မြို့နယ် ဂူတောင်ရွာမှ ရခိုင်အမျိုးသား (၁၁) ဦးအား ဦးညွတ်ဂါရ၀ပြုခြင်း
ဇွန် (၁၉) နေ့တွင် မိမိ၏ ရပ်ရွာနှင့် လူမျိုး ကို၊ ဘင်္ဂါလီကုလားများရန်မှ အသက်ပေးကာကွယ် ရင်း အသက်စွန့် သွားရရှာသော ရသေ့တောင်မြို့နယ် ဂူတောင်ရွာမှ ရခိုင်အမျိုးသား (၁၁) ဦးအား ဦးညွတ်ဂါရ၀ပြုခြင်း
Aung Shwe Oo's Facebook
ဇွန် (၁၉) နေ့တွင် မိမိ၏ ရပ်ရွာနှင့် လူမျိုး ကို၊ ဘင်္ဂါလီကုလားများရန်မှ အသက်ပေးကာကွယ် ရင်း အသက်စွန့် သွားရရှာသော ရသေ့တောင်မြို့နယ် ဂူတောင်ရွာမှ ရခိုင်အမျိုးသား (၁၁) ဦးအား ဦးညွတ်ဂါရ၀ပြုပါ၏။
နိုင်ငံတော် အစိုးရက ရခိုင်အရေးသည် အေးချမ်းတည်ငြိမ်သွားပြီဖြစ်ကြောင်းသတင်းတွေထုတ်ပြန်ထားသည်။ ပြန်လည်ထူထောင်ပေးမည့် အစီအစဉ် တွေပါချမှတ်ထားလိုက်သေးသည်။
ပထမအဆင့် ။ ယာယီနေရာချထားရေး၊ စားနပ်ရိက္ခာနှင့် ကျန်းမာရေး စောင့်ရှာက်မှု ဖြည့်ဆည်းပေးရေး။
ဒုတိယအဆင့် ။ အမြဲတမ်း နေထိုင်နိုင်ရေးအတွက် နေအိမ်များ ပြန်လည်ထူထောင်ပေးရေး၊ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်းများ ပြန်လည်ထူထောင် ပေးရေး။
တတိယအဆင့် ။ ရေရှည် တည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးနှင့် Rule of law အတိုင်း နေထိုင်ရပ်တည်နိုင်ရေး ။
သို့သော် လက်ရှိအခြေအနေမှာ ဘင်္ဂါလီကုလားများ၏ ဆူပူအကြမ်းဖက်မှုများကို ဒေသခံရခိုင်လူမျိုးများမှာ ခါးစည်းခံနေရဆဲပင်ဖြစ်သည်။ ဇွန် (၁၉) ရက်နေ့ တွင်လည်း ရသေ့တောင်မြိုနယ် ဂူတောင်ရွာတွင် အကြမ်းဖက်မှုဖြစ်စဉ်ဖြစ်ပွားခဲသည်။ ဂူတောင် ရွာသည် အိမ်ခြေ (၃၀၀၀) မျှရှိသော ရွာကြီးတစ်ရွာဖြစ်သည်။ ဘင်္ဂါလီရွာများနှင့် နီးကပ်စွာတည်ရှိသဖြင့် ဘင်္ဂါလီကုလားအကြမ်းဖက်သမားများ၏ ရန်ကို ကာကွယ်ရန် ရွာသူရွာသားများမှာ နေ့စဉ်နှင့်အမျှ ရွာလုံခြုံရေးအတွက် ကင်းစောင့်နေကြရသည်။ ဇွန်( ၁၉) ရက်နေ့ ညနေ (၈)နာရီခန့်တွင် အနောက်ပြင်ကုလားရွာမှ ဘင်္ဂါလီများသည် ဂူတောင်ရွာအား မီးလောင်တိုက်သွင်းရန် အုပ်စုလိုက်ကြီးချီလာကြသောကြောင့်၊ ကင်းစောင့်နေသော ရွာသားများနှင့် ထိတ်တိုက်တွေ့ ကြပြီး၊ ရွာသားများ၏ သက်စွန့်ဆံဖျား တားဆီးမှုကြောင့် ဘင်္ဂါလီများဆုတ်ခွါ သွားရသော်လည်း၊ ရခိုင်အမျိုးသား (၁၁) ဦးသေဆုံးကာ၊ (၇) ဦး ဒဏ်ရာရကြ၏။ သေဆုံးသူ (၁၁) ဦး၏ အလောင်းများအားလည်း ဘင်္ဂါလီများက ယူဆောင်သွားကြောင်းသိရသည်။ သေဆုံးသူများထဲတွင် ကျောင်းဆရာ နှစ်ဦး၊ ရပ်ကွက် အုပ်ချုပ်ရေးရုံးမှ စာရေးမ တစ်ဦး၊ အငြိမ်းစား တပ်မတော်သား တစ်ဦးတို့ ပါဝင်ကြပြီး၊ (၁၆)အရွယ် လူငယ်လေးတစ်ဦးတို့လည်းပါဝင်သည်။ အဆိုပါရွာတွင် အားကောင်းမောင်သန်၊ ကာလသားလူရွယ်များမှာ နိုင်ငံရပ်ခြားသို့ အလုပ်အကိုင်ရှာဖွေရန်ထွက်ခွါသွားကြသောကြောင့်၊ ရွာကာကွယ်ရေးအတွက် အသက်အရွယ်ကြီးရင့်သူများနှင့် ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်လူငယ်လေးများသာ တာဝန်ယူနေကြရရှာသည်။
ဒဏ်ရာဒဏ်ရာ ရရှိသူ ၇ ဦးအနက်မှ ရခိုင် တိုင်းရင်းသား နှစ်ဦးကို ရသေ့တောင် မြို့နယ်ဆေးရုံသို့ တင်ပို့ ကုသခဲ့ရာတွင် တစ်ဦး ရရှိခဲ့သော ညာဘက်ရင်အုံ ပွင့်ထွက်ဒဏ်ရာမှာ ယမ်းထောင်း တူမီးသေနတ် ထိမှန်ခြင်း ဖြစ်ကြောင်းနှင့် ကျန်တစ်ဦးမှာ ဦးနှောက် အာရုံကြောများ ထိခိုက်သွားသည်ဟုသိရှိရသည်။
ရခိုင်ဒေသတွင် စိတ်ထိခိုက်ဖွယ်ရာဖြစ်ရပ်များကားနေ့စဉ်နှင့် အမျှ ကြားမြင်နေကြရသည်။ မေးစရာမေးခွန်းတွေလဲ ထွက်လာသည်။ တကယ်တော့ အဆိုပါရွာသည်၊ ဘင်္ဂါလီရွာများနှင့် နီးကပ်စွာ တည်ရှိနေပြီး အချိန်မရွေးအကြမ်းဖက်မှုကို ခံရနိုင်သည်ကို သိသိကြီးနှင့်ပင် ဘာကြောင့် သက်ဆိုင်ရာက လုံခြုံရေးတွေချ မထားနိုင်ခဲ့တာလဲ။ ( ရွာသားများက လုံခြုံရေးချထားရန်တောင်းဆိုခဲ့ဖူးသည်။) ပြီးတော့ စစ်သားများ သည်နေ ဇွန်(၂၀)့ တွင်ရောက်လာကြသည်တဲ့၊ သို့ရာတွင် ဂူတောင်ရွာသို့ မဟုတ်၊ ကုလားရွာသို့။ ဘင်္ဂါလီကုလားရွာတွင်သာ တပ်စခန်းချထားကြသည်တဲ့။ ဒါကကော ဘာသဘောလဲ။ ရသေ့တောင်မြို့နယ် တွင် ပျံနှံနေသောသတင်းစကားတစ်ခုမှာ၊ သည်ဖြစ်ရပ်မဖြစ်ပွားခင်၊ ဘင်္ဂါလီကုလားများသည် ရသေ့တောင်ရဲစခန်းသို့လာရောက်ပြီး လာဘ်လာထိုးသည် ဟူ၏။
Posted by ကျောက်ဖြူသားချေ at 00:05
Copyright © 2011. Bengali Rohingya Terrorist Attack in Arakan, June 2012: ဇွန် (၁၉) နေ့တွင် မိမိ၏ ရပ်ရွာနှင့် လူမျိုး ကို၊ ဘင်္ဂါလီကုလားများရန်မှ အသက်ပေးကာကွယ် ရင်း အသက်စွန့် သွားရရှာသော ရသေ့တောင်မြို့နယ် ဂူတောင်ရွာမှ ရခိုင်အမျိုးသား (၁၁) ဦးအား ဦးညွတ်ဂါရ၀ပြုခြင်း . All Rights Reserved